“Waa inaad 100% diyaar u ahaato inaad ciyaarto” – Modric oo u digay Hazard – Gool FM
Raphael Varane oo doonaya inuu ka tago Kooxda Real Madrid… (Halkee ayuu ku sii jeedaa?)
(Madrid) 03 Seb 2020. Ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Real Madrid ee Luka Modric ayaa sheegay in saaxiibkiisa reer Belgium ee Eden Hazard, ay tahay inuu 100% taam u noqdo inuu ciyaaro xilli ciyaareedka cusub.
Real Madrid ayaa xagaagii lasoo dhaafay lasoo saxiixatay Eden Hazard, oo ay kala soo wareegtay naadiga reer England ee Chelsea, waxaana lagu qiimeeyay lacag dhan 120 million euros.
Laakiin wuxuu ku guuldareystay inuu sifiican ula ciyaaro Real Madrid xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, isagoo dhaliyay kaliya hal gool kaddib markii uu la kulmay dhaawacyo soo noqnoqday.
Haddaba Luka Modric ayaa fariin u diray saaxiibkiis Hazard, isagoo carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in ciyaaryahanka uu soo celiyo qaab ciyaareedkii lagu yaqaanay intii uu joogay kooxda Chelsea.
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Faransiiska ee “AFP”, Luka Modric ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay saaxiibkiis Eden Hazard, wuxuuna yiri:
“Hazard waa qof cajiib ah, waana ciyaaryahan weyn, laakiin wuxuu ku ciyaari jiray isagoo xanuun dareemaya, sababa la xiriira dhaawacyadiisa oo soo noqnoqday”.
“Marka aad ku jirto garoonka dadku waxay mar walbo kaa filayaan waxa ugu fiican, mana daneeyaan haddii aad dhibaatooyin qabto iyo haddii kale”.
“Waan la hadlay oo waxaan ku iri, Eden, laga yaabee inaadan u baahnayn inaad hada ciyaarto si aad u soo kabsato xilli ciyaareedka soo socda, waxaan u baahanahay inaad ku jirto xaalada ugu fiican”.
“Xilli ciyaareedka soo socda waa inaad 100% diyaar ahaato, haddii aadan taas ku guuleysanna, xaalada aad ayey kuugu adkaan doontaa”.
“Waxaan rajeynayaa inuu soo laaban doono iyadoo aan wax dhibaato ah qabin, intaas kadib waxaan hubaa inuu soo bandhigi doono awoodiisa isla markaana uu qof walba arki doono sababta ay kooxdu ula saxiixatay isaga”.
Halyeey kooxda Man United ah oo sharaxay tayada gaarka ah ee Van de Beek